Vehivavy Ny Ampahany Betsaka Amin’ireo Mpiasa Mpanamboatra Akanjo Ao Bangladesh, Saingy Tsy Izany Kosa Ny Mpitarika Sendikan’izy Ireo—Hatramin’izao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2015 8:09 GMT
Vakio amin'ny teny اردو, Español, Français, русский, বাংলা, English
Ity lahatsoratra sy tatitra amin'ny onjam-peo avy amin'i Bruce Wallace ho an'ny The World ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 16 Septambra 2015 ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty-
Nahitana loza roa ny indostrian'ny fitafiana ao Bangladesh tao anatiin'izay taona vitsy lasa izay: ny afo tao Tazreen tamin'ny Novambra 2012 sy ny firodanan'ny Rana Plaza tamin'ny Aprily 2013. Nanaraka taorian'izany ny hetsika iraisam-pirenena manavao ny indostria, saingy fandaminana momba ny asa izany. Nitangorona tao anaty efitra tahaka ity iray ity ny vondrona mpiasa izay vehivavy ny ankamaroany mba hiresaka ireo dingana ampahibemaso sy mety mampidi-doza: Milaza amin'ny olona mitantana ny orinasan'izy ireo — izay lehilahy ny ankamaroany — fa mikasa hitambatra ao anaty sendikà izy ireo.
Roa taona lasa izay, nahazo fisondrota-karama nitolomana mafy ny mpiasa mpanamboatra akanjo— mahery avo roa henin'ny karama farany ambany — mitovy amin'ny 68 dolara isam-bolana. Nilaza i Akter fa hitolona mba hampiakarana avo roa heny izany indray ny sendika ao anatin'ny dimy taona manaraka. Mampanantena fialan-tsasatra lava kokoa ho an'ny reny avy niteraka sy fizarana tombontsoa ho an'ny mpiasa ihany koa ny lalàna vaovao mifehy ny asa. Saingy nilaza i Akter fa ny sendika ihany no afaka manatontosa izany fampanantenana izany ho tanteraka.
Andro vitsy taty aoriana, nihazakazaka tany amin'i Akter izaho sy ny mpandika teniko raha teny an-dalana avy tao amin'ny biraon'ny Fikambanana Mpanondrana sy Mpanamboatra Akanjo ao Bangladesh, na BGMEA – vondrona indostria tompon'ny orinasa mpanao akanjo. 24 lavitrisa dolara ny vola miditra tamin'ny fanondranana akanjo tamin'ny taon-dasa, 80 isan-jaton'ny fitambaran'ny fanondranana entana ao Bangladesh. Ary maro ao amin'ireo manampahefana voafidy ao amin'ny firenena no mahazo tombontsoa amin'izany fanondranana izany. Izany no mahatonga an'i Akter hijoro hanohitra.
Voaràra ao Bangladesh ny Sendikà tamin'ny 2007 noho ny lalàna vonjimaika tohanan'ny miaramila izay natao handaminana ny korontana ara-politika. Saingy nisy ny fandaminana faobe momba ny asa hatramin'ny nandaniana ny lalàna vaovao mifehy ny asa tamin'ny 2013. Tokony ho sendikà 400 no nekena nanomboka teo, araka ny filazan'ny Foiben'ny Firaisankina ao Dhaka AFL-CIO. Miaro mpiasa mpanamboatra akanjo 150.000 ankehitriny ny sendikà, mbola ampahany kely amin'ireo efatra tapitrisa fitambarany. Ara-tantara, vitsy ny vehivavy mpitarika, kanefa vehivavy ny 80 isanjaton'ny mpiasa mpanamboatra akanjo.
“Matetika, ahitana ambaratongam-pitondrana maro ireo sendikà ireo, ny lehilahy no tena manjakazaka amin'izy ireo, hoy i Sanchita Saxena, mitantana ny Foibem-pianarana Chowdhury ao Bangladesh ao amin'ny Onivertiten'i Berkeley. “Matetika mpiasa mpikambana amin'ny sendikà matihanina ireo filohan'ny sendikà na ny lehibe ao amin'ny sendika, ka mbola tsy niasa teo amin'ny orinasa mpanao akanjo izy ireo.”